Ilhaan Cumar oo qaadeysa tallaabo ka dhan ah Maxamed Bin Salmaan kadib dilkii Jamaal Khashoggi – Hornafrik Media Network
Ilhaan Cumar oo qaadeysa tallaabo ka dhan ah Maxamed Bin Salmaan kadib dilkii Jamaal Khashoggi
By Liibaan Nuur	 On Mar 3, 2021
Ilhan Cumar oo Minnesota ku metasha Congress-ka Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday hindise sharciyeed ay ku doonayso in dhaxalsugaha Sacuudi Carabiya, Maxamed bin Salman, lagu soo rogo cunaqabateyn.
Warbixin todobaadkii hore uu baahiyay xafiiska agaasimaha sirdoonka qaranka Maraykanka ayaa lagu sheegay in bin Salman uu amray dilka weriye Jamal Khashoggi oo si arxan darro ah ugu dhintay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul.
Tallaabada ay qaaday Ilhan ayaa ka horkeeni karta afhayeenka aqalka wakiillada, Nancy Pelosi iyo xitaa Madaxweyne Joe Biden oo labaduba ka gaabsaday inay tallaabo adag ka qaadaan Maxamed bin Salmaan.
Wasaaradda arimaha dibedda ee Maraykanka ayaa meesha ka saartay in bin Salman loo ciqaabi doono dilkii Khashoggi, waxaa se ay sheegtay inay ka shaqeyn doonto sidii dib loogu wanaajin lahaa xiriirka Washington iyo Riyadh.
Ilhan ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter ku sheegtay in hindise sharciyeedka uu tijaabo u yahay dareenka bani’aadannimo ee Maraykanka.
“Haddii Maraykanka uu si dhab ah u taageero xorriyada hadalka, dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha, ma jirto sabab aan cunaqabateyn loo saarin Maxamed bin Salman oo ay sirdoonkeenu sheegeen inuu oggolaaday dilka weriye Jamal Khashoggi,” ayay tiri Ilhaan Cumar.